Archive du 20170630
Governemanta Tsy maintsy hoesorina ny praiminisitra
Resaka mandeha any an-dapa amin’izao fotoana ny fanovana ny mpikamban’ny governemanta tsy ho ela, ka voaresaka ny tsy maintsy hanalana ny praiminisitra Mahafaly Solonandrasana Olivier.
Rajaonarimampianina tao amin’ny France 24 Nandokandoka an’i Frantsa fotsiny
Vahiny tao amin'ny fahitalavitra frantsay France 24, ny filohan'ny Repoblika taorian’ny fihaonany tamin’ny filoha Frantsay Emmanuel Macron ny 28 jona teo.
Fifidianana 2018 Velon’ahiahy ireo mpanao politika
Efa tsy afa-po amin’ny fitantanan’ny “Hery Vaovao ho an’i Madagasikara” ny firenena intsony ny ampahany betsaka amin’ny vahoaka Malagasy.
Taratasin’i Jean Rehefa any andafy
Manakory Jean a ! Tadidinareo ve ilay hira hoe “Rehefa any andafy ialahy dia mihanahana, rehefa any andafy ialahy dia ohatry ny gana…” iny ?
Mitaraina ny tantsaha any Alaotra “Giazan’ny Fanalamanga ny taninay”
Tantsaha manodidina ny 30 000 any Amboasary, Andaingo, Morarano, Soalazaina ary Besakay hatrany Morarano Chrome,
KAOMININA TALATAMATY Kilonga madinika 100 no nizarana bodofotsy mafana
Taorian’ireo zokiolona sy fianakaviana sahirana ara-pivelomana notoloran’ny kaominina Talatamaty fanampiana nandritra ny fetin’ny
Lasan-ko vavany fotsiny!
Lasan-ko vavany toa haron-tabebaka ny filoha ankehitriny, ary miaro tena fatratra. Henjana raha handaha-teny sy hanova ny mainty ho fotsy, ka raha ny firesany tao amin’ny fahitalavitra Frantsay,
Mpitsabo mpamelonain’ny ranomasimbe indianina Nifampizara traikefa teto Madagasikara
Notontosaina tetsy amin’ny Motel Anosy omaly ny andro fahafiton’ireo mpitsabo mpamelon’aina mampiasa ny teny frantsay aty amin’ny ranomasimbe indianina
Fanafarana vary 200 000 taonina Vonona ireo mpandraharaha
Mitohy foana ny fanafarana vary avy any ivelany hamenoana ny tsy ampy amin’ny vokatra anatiny satria tsy ampy ny famokarana eto an-toerana vokatry haintany sy loza voajanahary, raha ny fanazavan’ny minisiteran’ny varotra sy ny fanjifana.
Halatra omby tany Betroka Zandary iray matin’ny dahalo
Mitohy hatrany ny asan-dahalo any amin’ireo kaominina ambanivohitra atsimon’ny nosy. Lavon’ny balan’ny dahalo tany Betroka omaly maraina ny zadary Adjudant Chef Pila Fanjanirina.
Notanterahina omaly alakamisy 29 jona teny amin’ny Solimotel Anosy ary hifarana anio zoma ny andiany fahafito amin’ilay andron’ny mpitsabo misahana ny vonjy taitra (médicine d”urgence) aty amin’ny ranomasimbe Indiana.